OEM & ODM MPPPT CHARTROLLER, အကောင်းဆုံး MPPT နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး chargroller
ကျနော်တို့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး controller အပေါ်အာရုံစူးစိုက်
pwm နေရောင်ခြည်အားသွင်းထိန်းချုပ်ရေး Controller
ld နေရောင်ခြည်အားသွင်း controller
SD နေရောင်ခြည်အားသွင်း controller ကို
OD နေရောင်ခြည်အားသွင်း controlller
MPPT နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး chargroller
TD75V Solar Charmy Controller
TD100V နေရောင်ခြည်အားသွင်း controller
TD150V Solar Charmy Charmy Controller
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > MPPT နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး chargroller
မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို PV ခင်းကျင်းမှုအမြင့်ဆုံးပါဝါအချက်ကိုခြေရာခံသည့် MPPT နည်းပညာအပေါ်အခြေစိုက်စခန်း။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel မှ Max ကိုရယူပါ။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ၏အားသွင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ပေးလိုက်သည်။
Tracer Dream 100V စီးရီး MPPPT Solar Charge Controller
Tracer Dream 100V Tu Series သည် MPPT နည်းပညာကိုကျင့်သုံးသည်။ Max.100V Solar Input, 12V / 24V Auto အလုပ်။ ၎င်းသည် 32 bits CPU ဖြင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်း, ထို့ကြောင့်တည်ငြိမ်မှုနှင့်မြန်နှုန်းကိုအာမခံနိုင်သည်။ ထပ်တူပြုခြင်းကို Rectifrack Technology ကို အခြေခံ. circuit ၏ငွေလွှဲခြင်းထိရောက်မှုကို 98.5% အထိတိုးမြှင့်နိုင်ပြီး PMAX ခြေရာခံခြင်းသည် 99. 5% အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ MPPT သည်တိကျသော PMOX ကိုနေရောင်ခြည်သည်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသည့်တိုင်အတိုဆုံးအချိန် (10 မှ 20) အတွင်း၌ (10 ~ 20) ကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အမင်းရာသီဥတုဆိုးရွားခြင်းသို့မဟုတ်အားနည်းသောနေရောင်ခြည်ကိုအပြည့်အဝကိုင်တွယ်နိုင်ပြီးဘုံအပျက်သဘောဆောင်သောဒီဇိုင်းအားဖြင့်မွေးစားခြင်းနှင့် Solar မှစတင်နိုင်သည်။ဒီမှာနှိပ်ပါဒေတာများကို download လုပ်ပါ
Tracer Dream 75V စီးရီး MPPPT Solar Charge Controller
Tracer Dream 75V စီးရီးသည် MPPT နည်းပညာကိုကျင့်သုံးသည်။ ၎င်းသည် 32 bits CPU ဖြင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်း, ထို့ကြောင့်တည်ငြိမ်မှုနှင့်မြန်နှုန်းကိုအာမခံနိုင်သည်။ ထပ်တူပြုခြင်းကို Rectifrack Technology ကို အခြေခံ. circuit ၏ငွေလွှဲခြင်းထိရောက်မှုကို 98.5% အထိတိုးမြှင့်နိုင်ပြီး PMAX ခြေရာခံခြင်းသည် 99. 5% အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ MPPT သည်တိကျသော PMOX ကိုနေရောင်ခြည်သည်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသည့်တိုင်အတိုဆုံးအချိန် (10 မှ 20) အတွင်း၌ (10 ~ 20) ကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အမင်းရာသီဥတုသို့မဟုတ်အားနည်းနေနေရောင်ခြည်ကိုအပြည့်အဝကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ဒီမှာနှိပ်ပါဒေတာများကို download လုပ်ပါ
တရုတ် Tracer အိပ်မက် 75v စီးရီးအသေးစိတ်နှိုင်းယှဉ်ထုတ်လုပ်သူများ -
တရုတ် Tracer အိပ်မက် 75V စီးရီးအသေးစိတ်နှိုင်းယှဉ်ထုတ်လုပ်သူ - ။အဆိုပါထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုသည်။ ပြည်သူ့အလွယ်တကူကြောင့်မကြာခဏသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝများတွင်အသုံးပြုသည့်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ဒေါင်းလုပ်ဒေတာရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
TD2307 vs TD2310 ။၎င်းသည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းရှိအရုပ်အလိုအစားထိုးခွင့်ရှိပြီးအခြေခံပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်ကိုလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ, ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ, စစ်ရေးစီမံကိန်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများတို့တွင်အသုံးပြုသည်။ဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
td2307 内部။ဘက်ပေါင်းစုံဒီဇိုင်းနှင့်အတူထုတ်ကုန်သည်အတွင်းပိုင်းအလှဆင်တွင်အသုံးပြုသောအခါထုတ်ကုန်တွင် Estual နှင့် functional အရည်အသွေးများကိုပါ0င်သည်။ လူအများစုကချစ်မြတ်နိုးသည်။ဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
China TD75V စီးရီးထုတ်ကုန်ပြသမှုထုတ်လုပ်သူများ -
China TD75V စီးရီးထုတ်ကုန်မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူများ - ။ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုအထူးကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များအဖွဲ့ကထောက်ပံ့သည်။ဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
TD75V Boost Voltage ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲ။
td75V 设置 - 提升提升။ အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း၏စီးရီးမှတဆင့်သွားပြီ။ ၎င်းသည်ချောချောမွေ့မွေ့, အရွက်များ, အက်ကြောင်းများနှင့်ပုပ်ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းကိုစစ်ဆေးသည်။ဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
TD75V ဗို့အားပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှုဗို့အား (LVR) ကိုမည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း။
td75V 设置 - 欠压欠压။ထုတ်ကုန်ကိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်စျေးကွက်သို့ထည့်သည်။ဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
အကောင်းဆုံး TD75V သည် voltage linconfing linnect volonnect (LVD) ကိုမည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း။ ကုန်သွင်းသူ
td75V 设置 - 欠压欠压။ဤထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစက်ကိုကျွမ်းကျင်စွာတပ်ဆင်ထားသည့်ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သားများကိုငှားရမ်းရန်ထုတ်လုပ်သူများကိုကူညီလိမ့်မည်။ ဤသည်အလှည့်အနေဖြင့်ထုတ်လုပ်သူများကိုပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်လိမ့်မည်။ဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
Professional TD75V အလင်းနှင့်အချိန်ထိန်းချုပ်မှုကိုမည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း။ ထုတ်လုပ်သူ
Professional TD75V အလင်းနှင့်အချိန်ထိန်းချုပ်မှုကိုမည်သို့သတ်မှတ်ရမည်နည်း။ ထုတ်လုပ်သူ။တစ်ခုချင်းစီကိုဖောက်သည်များ၏မျှော်လင့်ထားထက်ကျော်လွန်သောထုတ်လုပ်သည်။ဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
ldsolar controller ကို၏ဘက်ထရီအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်ဖို့ကိုဘယ်လိုစိုးရိမ်ပူပန်မနေပါနဲ့
Ldsolar Controller ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲဆိုတာစိတ်မပူပါနဲ့ဤဗွီဒီယိုတွင်, သင်ဘက္ထိ controller ကိုမည်သို့ထပ်မံသတ်မှတ်ရန်မည်သို့မည်ပုံနှင့် ပတ်သက်. သင်စိတ်ပူစရာမလိုကြောင်းအကြောင်းပြချက် 15 ခုကိုပြပါမည်။ ဒီဗီဒီယိုကိုခံစားပြီးစာရင်းသွင်းပါ။Wuhan သည်ယခင်က Wuhan ဂဟေအဖြစ်လူသိများသောစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်အသစ်ကိုဂဟေဆော်သည်&T က CO. , Ltd. , Professional ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး က r ကိုပေါင်းစပ်&D, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရောင်းအ0ယ်များသာနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုသာထုတ်လုပ်သည်။ စက်ရုံသည် Wuhan စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်တွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် GRID နေအဖွဲ့အစည်းတိုင်းအတွက်အဆင့်မြင့် ldsolar controller များကို install လုပ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။မှတ်ပုံတင်ထားသောအမှတ်တံဆိပ် Lddsolar ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကပစ္စည်းများမှာ -မြေယာအိပ်မက်စီးရီးစီးရီးများဖြင့်ကိုယ်စားပြုသော Pwm Solar Controllers များကို 10A မှ 60A, ဗို့အား 12V-24V, 48V မှ6း 60 အထိရှိသည်။Tracer Dream Series မှကိုယ်စားပြုသော MPPT နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစင်တာများသည် 15A မှ 80 နှင့်ဗို့အားဖြင့် 12V-24V-48V ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းသော 32-bit ချစ်ပ်များနှင့်မျိုးဆက်သစ်များကို Self-Developmed MPPT algorithm ကို အသုံးပြု. Controller သည် Solar Panels ၏အသုံးချမှုနှုန်းသည် 20% မှ 30% အထိထိထိရောက်ရောက်မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောတုန့်ပြန်မှုနှုန်းကိုပိုမိုမြင့်မားစွာတိုးပွားစေသည်။ဖောက်သည်များအပေါ်အတွေ့အကြုံကောင်းများရရှိရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Controller များကိုအသုံးပြုသောအခါ ISO9001 ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသေချာစေရန်အတွက် ISO9001 ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာပြီးနောက်ဆုံးပေါ်စမ်းသပ် standard en62109 နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း, တင်းကျပ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်အရည်အချင်းပြည့်မီသောထုတ်ကုန်များ၏ 99.9% ကျော်နှင့်အလွန်မြင့်မားသောဖောက်သည်ကျေနပ်မှုLDSolar Controller ကိုအသုံးပြုပါ,အီးမေးလ် - info@ldsolarpv.comငါ့သူငယ်ချင်းကျွန်ုပ်၏0က်ဘ်ဆိုဒ် - https://www.ldsolar.comFacebook တွင်ငါ့ကိုထည့်ပါ။ https://www.facebook.com/105593164766877ငါ့ကို YouTube တွင်ထည့်ပါ။ https://www.youtube.com/channel/ucvuuipwumbumprumprumpr.qfpkdqLinkedIn တို့ပေါ်မှာငါ့ကို Add: https://www.linkedin.com/in/%E4%BC%9F-%E5%BB%96-177932209/15 Battery Controller ကိုမည်သို့ထပ်မံသတ်မှတ်မည်ကိုသင်စိတ်မပူသင့်သည့်အကြောင်းပြချက်များသင်စိတ်ဝင်စားလျှင်ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။စိတ်ပူခြင်း # သတ်မှတ်ချက် # ဘက်ထရီ # အမျိုးအစား # LDARCCORTER # COLARCORTERSE # ControllerforCarpower # controllerforcarprolerberkterbiprollerkဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
LDSolar မှ TD75DS စီးရီး MPPPT Solar Charge Controller ကိုဆက်သွယ်နည်း
LDSolar မှ TD75DS စီးရီး MPPPT Solar Charge Controller ကိုဆက်သွယ်နည်းTracer Dream 75V စီးရီးသည် MPPT နည်းပညာကိုကျင့်သုံးသည်။ ၎င်းသည် 32 bits CPU ဖြင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်း, ထို့ကြောင့်တည်ငြိမ်မှုနှင့်မြန်နှုန်းကိုအာမခံနိုင်သည်။ ထပ်တူပြုခြင်းကို Rectifrack Technology ကို အခြေခံ. circuit ၏ငွေလွှဲခြင်းထိရောက်မှုကို 98.5% အထိတိုးမြှင့်နိုင်ပြီး PMAX ခြေရာခံခြင်းသည် 99. 5% အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ MPPT သည်နေရောင်ခြည်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသည့်တိုင်, ၎င်းသည်အလွန်အမင်းရာသီဥတုသို့မဟုတ်အားနည်းနေနေရောင်ခြည်ကိုအပြည့်အဝကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ဤဗီဒီယိုတွင် TD75V Series MPPPT Controller ကိုမည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်ကိုမိတ်ဆက်ပေးမည်ဒေတာများကို download လုပ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ